श्री स्वस्थानी ब्रतकथा : पञ्चदशो अध्याय : श्री गणेश श्री षट्मुख चरित्र वर्णन
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ । हे ! अगस्त्य मुनि ! अब म तिमीलाई श्री गणेशको श्री षट्मुख कुमारको उत्पत्ति भएको र तारकासुरको कथा सुनाउँछु । श्री महादेवजी र पार्वतीमाता कैलाशमा आनन्दसाथ रहँदै जाँदा बस्दै जाँदा एकदिन पार्वती माताले शरीरमा बुकुवा घस्ता निस्केका मयलको मूर्ति बनाई द्वारपाल बनाईराख्नुभएको थियो । त्यस बखत श्री महादेव बाहिर जानुभएको थियो । फर्किएर घरमा आउँदा त्यो द्वारपालले भित्र जान दिएन । यो देखेर श्री महादेवले क्रोधित भई त्यसको शिर काटी भित्र प्रवेश गर्नुभयो । महादेवलाई देखी “ हजूरलाई ढोकामा कसैले रोकेन ?” भनी सोध्नुभयो । “ रोक्न ता खाज्दै थियो तर त्यसको शिर काटिदिएर आएँ ।” भनी श्री महादेवले भन्नुभयो । यो सुनी पार्वतीले “ हे भगवान ! त्यो ता मेरो पुत्र हो । बडो विघ्न पर्न गएछ ।” भनी करुणा भावले रुन र सुर्ता गर्न लाग्नुभयो । यस्तो देखी श्री महादेवले भन्नुभयो ः–“ हे पार्वती ! मैले नचिनेकोले गर्दा भूलमा परेछु तर म उसलाई जसरी भएपनि जीवित पारिदिन्छु । तिमी सुर्ता नगर ।”
यसरी पार्वतीको मन बुझाई आफ्ना गणहरुलाई डाकी महादेवबाट आज्ञा भयो ः–“ हे गण हो ! तिमीहरु चारै दिशामा जाओ । त्यहाँ पहिले जसलाई दक्षिण शिरानी पारी सुतेको आफ्ना सामु देख्छौ त्यसको शिर लिएर आओ” भनी चन्द्रवाण दिई पठाउनुभयो । गणहरु चरैदिशामा खोज्दै जाँदै थिए । सामुनेमा दक्षिण शिर पारी सुतेका एउटा हात्ती देखापर्यो र त्यसलाई चन्द्रवाण प्रहार गरे । वाण गएर हात्तीको घाँटीमा लाग्यो र टाउको धडबाट अलग गरिदियो । त्यो हात्तीको शिर लगी गणहरुले श्री महादेवजीका अगाडि राखिदिँदै भने ः–“ हे ईश्वर ! हजूरको आज्ञा अनुसार सर्वप्रथम हामीले दक्षिण मोहडा गरी सुतेको यही हात्तीलाई देख्यौं र शिर लिई आउँदैछौं । ” त्यसपछि त्यस हात्तीको शिर लगी उक्त द्वारपालको मूर्तिमा जोडिदिनुभयो र त्यस वालकको नाम गणेश भनी राखिदिनुभयो ।
तहाँ उप्रान्त श्री महादेवजी पार्वतीका साथ भुली घरभित्र मात्रै रहन लाग्नुभयो । यो बुझेर इन्द्रले अग्नीलाई डाकेर आज्ञा गरे ः–“ हे अग्नी ! श्री महादेव पार्वतीका साथ भुलिरहन लाग्नुभएकोले यो व्रम्हाण्डको अब कसले रक्षा गर्ला ? कसरी रक्षा होला ? तिमी गएर वहाँलाई काशिपुरीमा ल्याउनुपर्यो । ” यस्तो इन्द्र महाराजको आज्ञालाई शिरोपर गरी अग्नीले हवस भनी कैलाश दरबारमा पुगी भित्र जान लाग्दा द्वारपालले रोक्दा भए । अग्नीले पनि वायुको रुप लिई ढोकाको माझमा ताला छिराउने प्वालबाट पसी भिक्षुक रुप लिई श्री महादेव पार्वती भएका एकान्त स्थलमा पुगे । अकस्मात भिक्षुक रुप अग्नीलाई देखी क्रुद्ध हुनुभएका महादेवको तृतीय नेत्र खुल्नासाथ अग्नी नाश हुनलागेको देखी जगत्माता पार्वतीका हृदयमा मातृकरुणा उत्पन्न भयो र रिसाएका श्री महादेवलाई शान्त गराउँदै श्री पार्वतीले भन्नुभयो ः– “हे नाथ ! भिक्षा माग्न आएका भिक्षार्थीलाई नास नगरिबक्सियोस् । अञ्जानमा आएछन् । केही दिऊँ र लिएर जानेछन् ।”
पार्वतीको यस्तो विन्ती सुनी श्री महादेवले आफ्नो वीर्य लिनु भई “लौ भिक्षा लैजा ।” भनी दिन खोज्दा अग्नीले पनि त्यो वीर्य हातमा थापी मुखमा हाली निलेर बाहिर निस्के । यसरी वीर्य निल्नाले अग्नीलाई गर्भ रह्यो र साह्रै डराई गङ्गाका तीरमा गई कुशघारीमा निलेको वीर्य उकेली दिए । त्यो वीर्य वनमा आगो बलेझैं देखिन थाल्यो । त्यसैबेला सप्तऋषिका पत्नीहरु गङ्गा स्नान गर्न त्यहीँ पुगे । उनीहरुले “कस्ले आागो फुकेर गएछ , हामी पनि ताप्न जाऊँ ” भनी जान खोजे तर एउटीले चाहीँ “अर्काको बालेको आगो ताप्न हुन्न ” भनी गइनन् । अरु छ ओटीले भने त्यहाँ गएर तापी आएर सातैओटी घर गए । ती आगो ताप्ने छ ओटीलाई भने गर्भ रहिसकेको थियो । तिनका पतिहरुले थाहापाई गर्भ रहेको कारण सोधे । ती छ ओटी ऋषिपत्नीहरुले कुनै जवाफ दिन सकिनन् र क्रोधित भएर ऋषिहरुबाट श्राप पाए । यसरी श्राप पाएका छ ओटी ऋषिपत्नीहरुले गङ्गामा गएर अफ्नो पेटको वीर्य उकेली आकाशमा गएर षट्कृतिका भएर रहे । आगो ताप्न नजाने एउटी ऋषिपत्नी अरुन्धती भने आफ्ना पति वषिष्ठका साथमा नै रहिन् । उता छ ओटीले उकेलेका त्यस वीर्यबाट ६ मुखको उत्पत्ति भई गङ्गाका पुत्र कुमार हुन गई श्री महादेवजीका साथमा रहन लागे ।
कुनै एकदिन श्री महादेवबाट गणेश र षट्मुख कुमारलाई आज्ञा भयो ः–“ हे गणेश ! हे कुमार ! तिमीहरु सुमेरु पर्वत भएका ठाउँमा जाऊ र त्यसको परिक्रमा गरिआऊ । दुई भाई मध्ये जो पहिले आइपुग्छ त्यसलाई म उत्तम प्रकारको वरदान दिउँला ।” श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुन्नेवित्तिक्कै कुमारले “हवस्” भनी आफ्ना वाहन मयूरमा सवार भई सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्न गए । गणेश भने “अब के गरुँ ? कसो गरुँ ?” भनी मनमा पीर मानी कुमार गएतिर हेर्न लागे ।
गहिरो चिन्तामा डुबेका गणेशलाई उनका प्रिय वाहन मुसाले अघिसरी विन्ती गर्यो ः–“ हे विनायक ! हजूरलाई मनमा केही पीरकष्ट भएझैं लाग्यो , के भयो ?” गणेशले यो सुनी श्री महादेवबाट आज्ञा भएका कुरा र षट्मुख कुमार मयूरमा सवार भै सुमेरु पर्वत परिक्रमा गर्न गएको वृत्तान्त बताउँदै भने ः–“ खोइ के गर्नु र ? तँ बाहन भने त्यत्ति सानो , म भने यत्ति ठूलो भूँडी र लामो सूँढले युक्त छु । अब के उपाय गर्नु ?” मालिकको करा सुनेर मुसो बोल्यो ः–“हे गणेशजी मसित एउटा बुद्धि पलायो । कसो हुन्छ सुनिबक्सियोस् । श्री महादेव , पार्वती र गङ्गा बसेका ठाउँमा गएर नम्रताका साथ हात जोडी ‘हे पिता ! हे माता ! मेरा निम्ति सुमेरु पर्वत भनेका र सम्पूर्ण देवता भनेका हजूरहरु नै हो इबक्सन्छ’ भनी तीनपल्ट परिक्रमा गरी दण्डवत परिक्रमा गरिबक्सियोस् । सुमेरु भनेका नै मातापिता हुन् , यत्ति गर्नाले त्यो विशेष वरदान हजूरलाई नै प्राप्त हुनेछ ।” मुसाले भनेका वचन सुनी गणेशजी अति खुशी हुँदै मुसालाई धन्यवाद दिँदै भन्न लाग्नुभयो ः–“ साह्रै राम्रो कुरा गरिस् , हे मुसा ! सानो भनेर हुँदैन तेरो बुद्धि धन्य छ ।”
यति ज्ञान पाएका गणेशले मुसाले भने झैं गरी तीनपल्ट महादेव , पार्वती र गङ्गाको परिक्रमा गरे । त्यो देखी श्री महादेव खुशी भई भन्न लाग्नुभयो ः–“हे गणेश ! तिमी धन्य रहेछौ । मातापिता नै सुमेरु पर्वत समान हुन् र तिमी देखी म अत्यन्त प्रशन्न भएँ । अब उप्रान्त स्वर्ग, मत्र्य , पाताल तीनै लोकमा कसैले कुनै कार्यको आरम्भमा पहिले तिम्रो पूजा नगरी गरेको कार्य सिद्धि नहोओस् । म तिमीलाई यही वरदान दिन्छु ।”
धेरै समय वित्दा पनि सुमेरु पर्वत परिक्रमा गर्न गएका षडानन आइनपुगेकाले माता गङ्गाले श्री महादेवमा विन्ती गर्न लाग्नुभयो ः–“ हे ईश्वर ! यता गणेशले वरदान पाइसके , मेरो पुत्र भने अझै किन आइपुगेन ?” गङ्गाका वचन सुनी श्री महादेवबाट आज्ञा भयो ः–“ हे गङ्गे तिमीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर । तब तिम्रो पुत्र षट्मुख कुमार आइपुग्ला । ”
श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाई व्रतका सम्पूर्ण विधि सोधेर पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन हात गोडाका नङ काटी , पूर्णिमाका दिनदेखि नित्य स्नान गरी , एक भक्त रही “मेरो पुत्र कुमार चाँडै आइपुगोस् ” भनी विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतको शाङ्गे (समाप्ती बेला) मा एकशय आठ–एक शय आठ प्रसाद भागहरुबाट आठ–आठ भागहरु “ मेरो पुत्र कुमार चाँडै आइपुगोस् ।” भनी प्रसाद पुत्रलाई दिन भनी छ्ट्याएको बेला श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रभावले सुमेरु पर्वत परिक्रमा सकी कुमार टुप्लुक्क दैला मै आइपुगे । गङ्गाले अति हर्षित हुँदै “ धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी ” भनी पुत्रलाई प्रसाद दिइन् ।
अनि कुमारले श्री महादेव छेउ गई शाष्टाङ्ग प्रणाम गरी विन्ती गरे र भने ः–“ हे पिता ! मलाई पनि वरदान प्राप्त होस् ।”तब श्री महादेवले “ हे कुमार ! स्वर्ग , मत्र्य , पाताल तीनैलोकमा कसैको केही कार्य गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरी गरेको कार्य सिद्ध हुनेछैन ।” भनी वरदान दिनुभयो ।
यत्ति कुरा कुमारबाट सुनिसकेपछि अगस्त्य मुनि विन्ति गर्नुहुन्छ “ हे स्कन्द कुमार ! जतिबेला श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी बौलाहा जस्तो भएर हिँड्नुभएथ्यो । त्यही अवसर छोपी तारकासुर दैत्यले देवताहरुलाई अमरावतीबाट हटाई इन्द्रणीसहित आफ्नो अधिनमा पारेको थियो । इन्द्रादि देवता पनि तारकासुरको शक्ति देखी डराई भागेर पशुपतिस्थानको मृगस्थलीमा आई बसेका थिए । यो कथा मैले तपाइ्र्रंका मुखबाट ( एघारौं अध्यायमा) सुनिसकेको थिएँ । अब म तारकासुर दैत्यका बारेमा अरु जान्न चाहन्छु । तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान प्राप्त गरेर अमरावती लिएको हो ? फेरि उसलाई कसले ? कसरी मारिदियो ? इन्द्रले आफ्नो स्वर्गको रजाईलाई फेरि कसरी प्राप्त गरे ? यी सम्पूर्ण कुराको वृत्तान्त सुन्न पाऊँ ।”
अगस्त्य मुनिका यस्ता प्रश्न सुनी कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ ः– हे अगस्त्य मुनि ! कश्यप पुत्र तारकासुरले दुग्धप्रभा नाम गरेको तीर्थमा स्नान गर्न गएका बखतमा पेची मुनिले त्यहाँ तपस्या गरेको देखी आफूलाई पनि तपस्या गर्ने इच्छा भयो र पेची मुनिसँग सोध्यो ः–“ हे मुनिवर ! तपाईंले यसरी तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्ने इच्छा जाग्यो । मलाई पनि तपस्या गर्ने क्रम वताइदिनुहोस् ।” तारकासुरको इच्छा बुझी पेचीमुनिले भने ः–“ हे दैत्य ! तँलाई तपस्या गर्ने मन भएछ । अब तैंले यो दुग्धप्रभा नाम गरेको तीर्थका शिरमा रहेको हिमालयपर्वतमा गई तपस्या गर्नु । ”
पेचीमुनिबाट यस्तो उपदेश पाएको तारकासुर दैत्य त्यहाँबाट हिमालय पर्वतमा गई एक हजार वर्षसम्म ठूलो कष्ट सही घोर तपस्या गर्यो । यस तरहको तपस्या देखी व्रम्हाजी प्रशन्न भई ः– “ हे तारकासुर ! तरो तपस्याबाट म सन्तुष्ट भएँ । मनमा जे इच्छा छ सो वर माग ।” भन्ने आज्ञा भयो । व्रम्हाको दर्शन पाई हर्षले गद्गद् हुँदै शाष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी तारकासुरले भन्न लाग्यो ः–“ हे पितामह ! हजूरको दर्शन पाएर म धन्य भएँ । ‘वरदान माग’ भनी हजूरबाट आज्ञा भयो । सो म के माग्छु भने हजूरबाट सृष्टि भएका प्राणी मध्येबाट पाँचवर्ष उमेर नाघेका कसैबट पनि मेरो मृत्यु नहोस् । फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा गिराउला उसको पनि शिर फुटेर मृत्यु होस् । मैले सम्पूर्ण इनद्रादि देवतालाई परास्त गर्न सकूँ ।” तारकासुरले मागेको यो वरदानलाई व्रम्हाले “तथास्तु” भन्नुभयो र आफ्नो व्रम्हास्त्र पनि दिनुभई अन्तध्र्यान हुनुभयो ।
मनले चहना गरे अनुसारको वर पाएको तारकासुर दैत्यले आफू वलवान भएर अर्कालाई तृण बराबर पनि नठानी , सारा दैत्यगण साथमा दिई स्वर्गको अमरावती पुगी इन्द्रादि देवतालाई युद्धका निम्ति ललकार्यो । कोटीकोटी दैत्यहरु लिएर तारकासुरले आफूहरुसँग जाइलाग्न आएको देवताका राजा इन्द्रले देखी आफ्ना पनि तेत्तीस कोटी देवता जम्मा गरी आ–आफ्ना शस्त्रअस्त्रले सुसज्जित भई युद्धका निँित अघि सरे । युद्धको मैदानमा घनघोर युद्ध भयो ।
देवताहरुले दैत्यपट्टिका करोडौं सेनाको संहार गरे । आफ्ना धेरै सेनाको नाश भएको देखी तारकासुर दैत्यले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यसित गई विन्ती गर्यो ः–“हे गुरुदेव ! देवताहरुले हाम्रो दैत्य सेनाको ठूलो सँख्यामा नाश गरिदिए , तपाईंले उद्धार गरिदिनुपर्यो ।” यो कुरा सुनी गुरु शुक्राचार्यले युद्धका मैदानमा आई सञ्जीवजी विद्या पढी पानी छर्किदिए । पानीका छिटा पर्नासाथ अघि मरेका सकल दैत्यहरु विउँझिएर फेरि युद्ध गर्न अग्रसर भए ।
आफूले मारेका दैत्यहरुलाई फेरि बचाइएको देखी क्रुद्ध भएका देवेन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढी वज्र प्रहार गर्दै अनेक तरहसँग युद्ध गर्न लागे । दशहजार वर्षसम्म घनघोर युद्ध चलिरह्यो । दुबैपक्षका कोटीकोटी सेनाहरु मरे । दैत्यहरुपट्टि चाहिँ मर्नासाथ गुरु शुक्राचार्यले विउँझाइदिने र देवतापट्टिको चहिँ मरेका मरेकै हुने हुँदा सकल देवता सहित देवराज इन्द्र त्यहाँबाट भाग्न थाले । त्यसैबेला देवगुरु वृहस्पति आई भन्नुभयो ः–“ हे इन्द्र महाराज ! यो सङ्ग्राममा तपार्इंंको जित असम्भव छ किनभने अघि तारकासुर दैत्यले एक्हजार वर्षसम्म कठोर तपस्या गरी व्रम्हालाई खुशी गराएर ‘व्रम्हाबाट सृष्टि भएका प्राणी मध्ये पाँच वर्ष उमेर नाघेका कसैबाट पनि उसको मृत्यु नहुने र जसले उसको शिर भूइँमा गिराउला , त्यसको पनि शिर फुटेर मृत्यु हुने’ वरदान पाएको छ । यसकारण अब तपाईंहरु श्री महादेवका शरणमा जानुहोस् ।”
हे अगस्त्य मुनि ! तब गुरु वृहस्पतिका कथन अनुसार देवताहरु आएर मत्र्यलोकको पशुपतिस्थानको मृगस्थलीमा आएर लुकेर बसेका थिए । उनीहरुले श्री महादेवलाई भेट्न नसकेर त्यहाँ बसेका थिए । किनभने त्यसबेला श्री महादेव सतीदेवीका वियोगले वौलाहाजस्ता भएर हिँड्नु भएको थियो । कालान्तरमा हिमालय पुत्रीको रुपमा सीदेवीको जन्म भएर पार्वती नाम रहन गई श्री महादेवको आराधना गरी शिवपार्वतीको विवाह भएको थियो । जुन पुण्य कथा मबाट तपाईंले सुनिसक्नु भएको छ ।
शिवपार्वतीबाट गणेश र कुमारको जन्म नहोउञ्जेल धेरै समयसम्म इन्द्रादि देवता पशुपतिस्थानको मृगस्थलीमा नै लुकेर बसेका थिए । यसरी देवताहरु भागेर गएपछि दैत्यराज तारकासुरले स्वर्ग , मत्र्य , पाताल तीनैलोकको रजाईं गरी परम आनन्दले रहँदो भयो ।
धेरै कालपछि एकदिन देवराज इन्द्रले तेत्तीसकोटी देवताहरुलाई डाकी भने ः–“ हे देवता हो ! तारकासुर दैत्यले अमरावती रजाईं गरेको र हामीलाई यसरी दुःख दिएको भेरै काल भयो । अब त्यस पापिष्ठको संहार गरी हामीले आफ्नो अमरावती फर्काउनुपर्छ । गुरु वृहस्पतिको आज्ञा अनुसार अब हामी श्री महादेवका शरणमा जाऔं । श्री महादेवका गणेश र कुमार दुई पुत्र जन्मिएका छन् र ती दुईबाट हाम्रा शत्रु तारकासुरको नाश हुनेछ । अब गएर श्री महादेवसित विन्ती गरौं ” भनी तेत्तीसकोटी देवताका साथ गई श्री महादेवमा विन्ती चढाउन कैलाश पुगेका इन्द्रले श्री महादेवजीलाई शाष्टाङ्ग प्रणाम गरी “ हे नीलकण्ठ ! पापिष्ठ तारकासुरले इन्द्राणी सहित अमरावती हामीबाट खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो । अब त्यसको संहार गरी हाम्रँो उद्धार गरिबक्सियोस् ।” भनी विन्ती गरे ।
यस्तो विन्ती सुनिसकेपछि श्री शम्भुले भन्नुभयो ः–“ हे इन्द्रादि देवगण हो ! तारकासुर दैत्य मबाट मारिँदैन । तर मेरो पुत्र कुमारले भने मारिदिनेछ । देवता , यक्ष , गन्धर्व आदि सबैले भएर कुमारलाई सेनापतिको पदमा राखी युद्ध भूमिमा जाओ । म पनि आउनेछु ।” यस्तो श्री महादेवको आज्ञा सुनी सो आज्ञालाई शिरोपर गरी श्री महादेवजीमा शाष्टाङ्ग प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवता , यक्ष , गन्धर्व , भूत , प्रेत प्रमथगण सहित भई श्री कुमारजीका सेनापतित्वमा तारकासुर दैत्यसँग युद्धका निम्ति भगवान शिवको पिनाकधनु लिई प्रस्थान गरे ।
गणेशजीलाई युद्धमा लाने देवताहरुले विर्सिएका हुँदा गणेशजीले आफ्नो बाहनसित भन्नुभयो ः–“ हे मुसा ! लौ हेर त श्री महादेवबाट मैले पाएको वरदानलाई देवताहरुले अपमानित बनाए ।” आफ्ना मालिकका यस्ता कुरा सुनी मुसाले भन्यो ः–“ हे गणनाथ ! उनीहरुले अन्यथा गरेका होइनन् । अबश्य पनि हजूरलाई भन्न विर्सिएका छन् । म गई सम्झाई आउनेछु ।” भनी तुरुनत गई पिनाकधनुको ताँदो काटिदियो र फर्की आयो ।
इन्द्रादि देवताहरुले जब पिनाक धनुको ताँदो काटिएको देखे तब बडो खेद मान्दै भन्न लागे ः–“ अहो ! यो केबाट यस्तो विघ्न हुनगयो ? हाम्रो साइत बिग्रियो । अब कुन उपाय गर्ने हो ?” यो सुनी श्री महादेवजीबाट आज्ञा भयो ः–“ हे देवता हो ! अन्यथा नठान ! तिमहरुले गणेशलाई जाऊँ भन्न बिर्सियौ कि कसो ? उनलाई साथमा नलिए काम सफल हुँदैन । यसर्थ गणेशलाई पनि साथ लैजानुपर्छ ।”
श्री महादेवको आज्ञा सुनी इन्द्रादि देवताहरुले श्री गणेशलाई पनि साथ लिई तारकासुर दैत्यसँग युद्ध गर्नका निम्ति अमरावती पुरी गए । त्यहाँ देवता र दैत्यहरुको परस्पर घोर घमासान युद्ध प्रारम्भ भयो । तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटेर एक योजन पछि हटायो । कुमारले पनि क्रुद्ध भएर तारकासुरको रथलाई त्यसैगरी चार योजन पछि हटाइदिनुभयो । यो देखी क्रोधले आकुल भएको तारकसुरले कुमारमाथि खड्ग प्रहार गर्यो । आफूमाथि खड्ग प्रहार गरेको देखी कुमारले धनुको ताँदोलाई कानसम्म खिँची तारकासुरको मुन्टोलाई लक्ष्य गरी चन्द्रवाण प्रहार गर्नुभयो । त्यो वाण गएर दिनका सूर्यास्त हुनु र तारा नदेखिनु ठीक सन्ध्या समयमा तारकासुरको शिर चुँडायो । त्यो देखी हतारसाथ श्री महादेव पुगी त्यो दैत्यको शिर भूमिमा गिर्न नपाउँदै बीचमा नै समाउनुभयो ।
तारकासुरको त्यो अवस्था देखेर दैत्य सेनाहरु दशै दिशातिर भागेर आ–आफ्ना प्राण बचाउन तिर लागे । त्यसपछि इँदा्रदि सम्पूर्ण देवताहरुले कुमारको जयगान गर्दै “ धन्य धन्य कुमार ! ” भन्दै उनलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे ।
त्यहाँ पुगेपछि इन्द्रादि देवताहरुले श्री महादेवजीमा विन्ती गरे ः–“ हे जगदीश्वर ! हजूरका कृपाले शत्रुको नाश गरी आइपुग्यौं । अब आज्ञा पाएमा हामी अमरावती पुरीमा जाने थियौं ।” योे विन्ती सुनेर श्री महादेवले इन्द्रलाई भन्नुभयो ः– हे इन्द्र ! तिम्रो राज्य अब कहिल्यै कसैले जित्न सक्ने छैन र अकंटक रहनेछ ।” यो सुनी अति प्रशन्न भएका इन्द्र सहित तेत्तीसकोटी देवताले श्री महादेवजीलाई शाष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी अमरावतीमा गएर आनन्दले राज्य गर्दा भए । आगौं कथा अर्को अध्यायमा । इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री गणेश षट्मुख चरित्र वर्णन नाम पञ्चदशोेअध्याय श्री स्वस्थानी परमेश्वरीकी जय ! जय !! जय !!!